Pakistan: MSF oo Badisey Hawlaha ay Wax Kaga Qabaneyso Daadadka, Welise Wax Badan ayaa Dhiman - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Ka dib muddo ka badan afar toddobaad markii ay ka soo wareegatey tan iyo markii ay bilowdey hawlaha ay wax kaga qabaneyso daadadka qarqiyey Pakistan, ayaa Médecins Sans Frontières (MSF) ay kor u sii qaadeysaa hawlaheeda ay ka waddo degaannada ay waxyeelleeyeen daadadku, iyada oo sidoo kale diyaarineysa in ay hawlaheeda ballaariso si ay uga mid dhigto goobo kale oo ay daadadku ay kumanaan qof ka jareen gargaarka ay sida weyn ugu baahan yihiin.
Sii wanaajinta Helitaanka Biyo Nadiif ah iyo Fayadhowr
Si loo xakameeyo suurtagalnimada cudurro ka dhasha biyaha, ayaa MSF waxa ay ku dhaqaaqdey hawlo ay biyo nadiif ah uga qaybineyso magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka fogfog ee Khyber Pakhtunkhwa’s Charssada, Swat, Nowshera, Lower Dir iyo Dargai. Maalmaha soo socda ayaa MSF waxa ay hawlo dhinaca biyaha iyo fayadhowrka ah ka bilaabeysaa gobollada Sindh iyo Balochistan.
Maalmaha soo socda, ayaa kooxo ay qorsheynayaan in ay qiimeeyaan nidaamka biyaha ee magaalada Dera Murad Jamli ee gobolka Baluchistan iyo Sukkur ee gooblka Sindh, si ay u hubiyaan in nimaadka dadweynaha gaarsiiya biyaha uu koloriin ku daro ka hor inta aaney biyuhu gaarin dadweynaha.
Ugu yaraan 540,000 litir oo biyo nadiif ah ayaa hadda maalin kasta la bixiyaa iyada oo loo marayo 52 rugood oo biyaha lagu bixiyo oo ay ka mid yihiin baabuur/booyado, haamo, tuubooyin, iyo guryaha oo toos loogu qaybiyo. MSF waxa ay sidoo kale weelal iyo baaldiyo ay siineysaa qoysaska aan haysan weelal biyo oo ku filan.
“Waxaa welwel leh in qoysaska qaar oo bambooyin yaryar ku haysta guryahooda ay bilaabeen in ay mar kale isticmaalaan ilahoodii biyaha. Tani ma ahan mid wanaagsan waayo biyaha ayaa weli ah kuwo faddareysan, waxaana ay tani keeni kartaa cudurro badan oo biyaha ka dhasha. Waxa aan sii wadi doonnaa bixinta biyo nadiif ah ilaa aan ka diyaarinno nidaam aan ku hubinno in ay biyaha yihiin kuwo la isticmaali karo,” ayaa uu yiri Muhammad Shakeel, oo xubin ka ah kooxda MSF ee biyaha iyo fayadhowrka ee Nowshera.
MSF waxa ay sidoo kale bulshooyinka degaanka gacan ka siineysaa nadiifinta iyo dayactirka ceelasha biyahoodu faddaroobeen.
Shaqaalaha Caafimaadka: Waa Qayb Aad Muhiim u Ah
Shaqaalaha dhiirigelinta caafimaadka ayaa kaalin muhiim ah ka qaadanaya in dadka laga wacyi-geliyo halisaha caafimaad ee jira. Tusaale ahaan, marka biyaha la qaybinayo ayaa ay dadka tusaan sida loo isticmaalo kiniiniyaasha biyaha lagu nadiifiyo si guryaha loogu helo biyo ammaan ah oo la cabbo. Xirmooyinka gargaarka ee caadi ahaan la qaybiyo waxaa ka mid ah 20 kiniiniyaasha nadiifinta biyaha ah, oo marka si habboon loo isticmaalo, uu micnaheedu noqonayo in qoys toddobo xubnood ka kooban uu heli karo biyo ammaan ah oo nadiifna ah muddo laba toddobaad ah.
Tusaale ahaan, Dera Murad Jamali, oo ka tirsan gobolka Balochistan, MSF ayaa in marka laga soo tago, welwelka ay ka qabto xaaladaha nadaafadda ee liita ee hadda jira sidoo kale ka welwelsan in nafaqo-xumadii horeba u jirtey ay ka sii dareyso. Sidaa daraaddeed shaqaalaha caafimaadka waxa ay sidoo kale dadka ka wacyigelinayaan arrimaha la xiriira nafaqo-xumada, iyo sidoo kale iyaga oo gudbinaya farriimo la xiriira caafimaadka iyo nadaafadda. MSF waxa ay hadda ugu yaraan 300 oo carruur 5 sano jir ka yar ah oo qaba nafaqo-xumo ba’an ay ku daaweyneysaa barnaamijkeeda quudinta xaaladaha degdegga ah ee carruurta shan sano jirka ka yar ee horeba uga jirey degaanka.
Xoojinta xarumaha caafimaadka ee wareega iyo tas-hiilaadka caafimaadka
Laga soo bilaabo kowdii Agoosto, MSF waxa ay in ka badan 16,664 la-talin caafimaad ah siisey dadka dhibaatooyinka la xiriira daadadka ku saameeyeen degaannada kala duwan ee dalka Pakistan. Ilaa kalabar la-talintani waxaa toban iyo afar xarumaha caafimaadka wareega ah ay ka fuliyeen tuulooyinka fogfog iyo degaannada dadku ku badan yihiin ee Dera Murad Jamali, Khabula, Sobhatpur, Malakand, Swat, Lower Dir, Charsadda, Sukkur iyo Peshawar.
Maaddaama ay kor u kaceen tirada bukaannada qaba Shuban Biyoodka Ba’an, MSF waxa ay sidoo kale lix Xarumaha Daaweynta Shubanka ah ka sameysey Swat, Lower Dir, Malakand, Hangu, Kot Addu iyo Dera Murad Jamali. Isla markaa waxaa si weyn kor loogu qaadey shaqaalaha, daawooyinka iyo adeegga/sahayda loo adeegsado daaweynta cudurrada ka dhasha biyaha sida daacuunka, waxaana MSF ay diyaar u tahay in ay Xarumo Daweynta Daacuunka ah oo kale ay furto haddii loo baahdo.
Degaanka Swat, Khyber Pakhtunkhwa, ayaa waax karantiil (gooni-sooc) ah laga dhex sameeyey cusbitaalka Mingora, taas oo ay ka mid tahay teendho lagu bixiyo daaweynta fuuq-celinta afka laga qaato oo sidoo kalena lagu dhiirrigeliyo nadaafadda. Degaanka Dera Murad Jamali, Baluchistan, waxa ay kooxdu diyaarisey Xarun Daaweynta Daacuunka ah oo leh 20 sariirood si wax looga qabto tirada badan ee bukaannada ah ee ka inaya degmooyinka deriska la ah ee ay weli daadadku ku socdaan. Degaanka Kot Addu, Punjab waxa ay MSF 70 sariirood ku kordhisey Xaruntii Daaweynta Daacuunka ee 30ka sariirood yaalleen si loogu daweeyo bukaannada kale ee cusbitaalka la dhigey.
Ilaa hadda, kooxuhu waxa ay daweeyeen ku dhowaad 1,600 xaaladood oo Shuban Biyood Ba’an ah.
Qaybinta Gargaarka oo Weli Socota
Iyada oo halista daadad cusub oo yimaada ay weli jirto, ayaa MSF waxa ay sii waddaa in ay dadka ay dhibaatooyinku soo gaareen gaarsiiso waxyaabaha daruuriyaadka ah si ay gacan uga siiso in ay helaan heer nololeedka aan laga hoos mari karin iyo si ay uga hortagto faafidda cudurrada. Degaannada Baluchistan iyo Khyber Pakhtunkhwa ayaa in ka badan 14,675 xirmooyinka gargaarka ah iyo 4,855 teendho laga qaybiyey degaannada ay dhibaatooyinku saameeyeen. Xirmada caadiga ah waxaa ka mid ah baaldiyo, saabuun, saabuunta wax lagu dhaqdo, rumey (cadey), jiir-gaan, agabka caafi-dhowrka haweenka, shukumaan, koobabka caagga ka sameysan, maacuunta jikada, bacaha fidsan, teendhooyin iyo joodariyaal iyo sidoo kale kiniiniyaasha nadiifinta biyaha. Maalmaha soo socda, inta ay kooxuhu qiimeynayaan goobo cusub ayaa xirmooyin gargaar oo kale iyo teendhooyin la siin doonaa dadka u baahan.
Baahiyo kale, Waxqabadyo Cusub oo Laga wado Goobo Cusub
Degaannada balochistan iyo Upper Sindh, heerarka biyaha Indus ee kor u kacaya ayaa ku khasbey 90% dadka ku nool degaannada sida Usta Muhammad, Dera Allar Yar iyo Ganakha in ay ka baxaan guryahooda. Koonfurta Kashmor, iyo koonfurta Sinch, ayaa daadadku ay sidoo kale qoysaska saboolka ah ku khasbeen in si ay ugu badbaadaan ay u baxaan meelaha jooggoodu sarreeyo, meelaha laga sameeyo biyo-moosyada ee kannaallada waaweyn, waddooyinka tareenka ama meel kasta oo bannaan oo ay ka heli karaan dhulka ku dherersan waddooyinka.
Degaanka Sukkur, gobolka Waqooyiga Sindh, MSF waxa ay hadda ka bilowdey in ay qaybiso agabka gargaarka waxaana ay furtey saddex xarumaha caafimaadka ee wareega ah si ay adeeg caafimaad oo lacag la’aan ah u siiyaan bulshada ay saameeyeen daadadku. Kooxaha caafimaadka ee wareega ee Sindh ayaa markiiba la kulma kooxo ilaa kumanaan qof gaaraya oo si ba’an ugu baahan daryeel caafimaad, gaar ahaan carruurta. Sidoo kale degaanka Sukkur, MSF waxa ay hadda taageertaa waaxda 30-ka sariirood ka kooban ee daaweynta carruurta 5 sano jirka ka yar. Koonfurta Sindh, MSF waxa ay xafiis cusub ka furtey Hyderabad si uu isugu duwo hawlaha gargaarka ee degaankaa.
Kooxo sahan ah ayaa wada hawlihii ay ku qiimeynayeen si ay u ogaadaan degaannada aan waxqabadku weli gaarin ee Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, iyo Sindh iyo Balochistan si waxqabad degdeg ah meelahaas loo gaarsiiyo. Meelahan cusub, ayaa kooxo MSF ka tirsan ay hadda diyaarinayaan in ay wax ka qabtaan baahiyaha ballaaran ee caafimaadka iyo bani’aadamnimada ee dadka ay masiibadu soo gaartey. Arrintan ayaa loo marayaa iyada oo si joogto ah loo qaybiyo agabka gargaarka iyo bixinta biyo ammaan ah, iyo sidoo kale sameynta xarumo caafimaad oo wareega iyo xarumo daaweeya daacuunka.
In ka badan 110 shaqaale caalami ah ayaa hadda ka barbar shaqeynaya 1,200 Pakistaani ah ee ka shaqeeya barnaamijyada hadda jira iyo kuwa wax ka qabashada daadadka ee dalka Pakistan.
Ilaa 1988, MSF waxa ay gargaar caafimaad siineysey muwaadiniinta Pakistan iyo qaxootiga Afqaanistaan ee la silcaya raadadkii ay reebeen iskahorimaadyada hubeysan, helitaanka daryeelka caafimaadka ee liita, iyo masiibooyinka dabiiciga ah ee Khyber Pakhtunkhwa, Degaannada Qabaa’ilka ee uu Maamulo Federaalka, Balochistan, iyo Kashmir. MSF dowlad kama qaadato maaliyad ay ku fuliso hawlaheeda ay ka waddo Pakistan waxaana ay dooratey in ay keliya ku tiirsanaato deeqaha ay bixiyaan shakhsiyaadka caadiga ah.
Tags: daad, Musiibo dabiici ah, Pakistan